Buza indlela yokunqoba ngayo ukulwa noDamarar Referral Spam
Kubalulekile ukuvimbela ugaxekile wokudlulisa i-darodar.com ku-Google Analytics yakho ngaphambi kokuphuza kakhulu futhi umgwaqo ongekho emthethweni ukuthi i-spoy yakho embi ku-akhawunti yakho inciphisa isikhundla sakho sokusesha . Okukhethwa kukho ukudala izihlungi zamagama ezimphathi ku-Google Analytics yakho. Ngenhlanhla, i-Google isinikeze amathiphu amaningi namasizo asebenzayo mayelana nendlela yokudala izihlungi ezichazwe ngaphambilini ukuze zingabandakanyi i-darodar.com yokudlulisela ithrafikhi kusuka ku-akhawunti yakho. Uma uqaphele izixhumanisi ezingaqondakali zokudluliselwa emibhalweni ye-Google Analytics ukuthi ikuqondise kabusha kuzixhumanisi ezihambisanayo ze-eBay - renew chinese passport online.com ne-Amazon.com, ake sikutshele ukuthi umkhwabanisi waseRussia uqoqe iqoqo lama-ID wokulandelela we-Google Analytics futhi afakwe i-malware kuwo wonke kubo. Kunamathuba wokuthi iwebhusayithi yakho ithola ithrafikhi enobungozi ngoba ibone i-ID yakho yokulandela.
U-Oliver King, i- Semalt uMenenja Wokuphumelela Kwekhasimende, uchaza ukuthi le ndoda yaseRussia isebenzisa wonke lawo ma-ID ukuze ahlole i-Google Analytics ngaphandle kokubuka amakhasi akho wewebhu. Ngaphezu kwalokho, yena, uthumela i-URL ethize ye-referrer, ezama ukukhohlisa i-Google Analytics yakho. Uzobona ukuthi i-URL kuwebhusayithi yakho, futhi izokuqondisa kabusha kusixhumanisi sokubambisana ukuthi umfana omubi ushiye ngemuva. Ngokuvamile, ama-Amazon no-Alibaba asetshenziswa njengezixhumanisi ezihlangene, kodwa umfana omubi uphumelele izixhumanisi eziningi zokuxhumana futhi waqondisa kabusha abasebenzisi ethembeni lokuthengisa imikhiqizo yakhe kwi-inthanethi nokuthola ikhomishana ethile. Iningi lamawebhusayithi omthengisi abuyisela ama-ID abambisene nabo kuma-cookies ngezinsuku ezimbalwa, futhi abantu ababi baqhubeka bethola imali ngokusebenzisa isayithi lakho.
1..Abanye abantu bazokucela ukuba ushintshe ifayela le-.htaccess kusayithi lakho, kodwa lokhu akusizi ngalutho njengoba umfana omubi engayivakashela iwebhusayithi yakho.
2. Akuthinti isayithi lakho, ngakho akufanele ukhathazeke ngakho. Esikhundleni salokho, kuzothinta umbiko wakho we-analytics, futhi izinga lokunciphisa lingase landa.
3. Ama-URL wokudlulisa azoba ne-ID yakho ye-Google Analytics Tracking. Lo mfana waseRashiya uzonquma ukuthi ubani ovakashela ama-URL wokudlulisela phambili ngaphambi kokuwaqondisa kabusha kuzixhumanisi zakhe ezihambisanayo.
4. I-Property yokuqala ku-akhawunti yakho ye-Google Analytics izoshaywa manje - I-Property ne-ID yakho yokulandelela izophela ngohlamvu "I."
5. Ama-ID abambisene nawo agcinwa kuma-cookies, engenzi izinkinga kwikhompyutha yakho noma iwebhusayithi yakho. Kodwa kuyobavuza lowo mfana omubi ngokuphathelene nezinkomidi nokuthuthukisa izinkokhelo.
6. Ukuze uthole amasayithi amasha neziyisisekelo, kufanele uvimbele ugaxekile usebenzisa izihlungi zangasese zokusingathwa kwegama lokusingatha ku-Google Analytics yakho.
Ukuthunyelwa kogaxekile kweWebhu kube yiyodwa yezinkinga ezinkulu futhi kuyindlela yokwenza izinto ezonakalisa isayithi endaweni ye-intanethi. Kufanele ukhumbule ukuthi akekho abantu abavakashela iwebhusayithi yakho. Esikhundleni salokho, ugaxekile wokudlulisela i-darodar.com uvakashela isayithi lakho, udala ukubonakala futhi uthola lawo mahlombe alotshwe ku-akhawunti ye-Google Analytics. Ngakho-ke, uma uke wabona insipho emgwaqweni wokudluliselwa kwe-akhawunti yakho ye-analytics, ungase ube nesithakazelo ekudaleni izihlungi noma ngokushintsha izilungiselelo zefayela .htaccess's. Lokhu kuzokuvimbela umfana omubi ukuqondisa kabusha izivakashi zakho kumawebhusayithi akhe asekelwe kumakhomishana.